FAQ - Green Camping Products Co., Ltd
Ingabe etendeni lakho waterproof?
Kungakhathaliseki itende amanzi hhayi kuphela ezihlobene amanzi ikholomu kangakanani lendwangu, abaluleke kakhulu kukhona umklamo kanye bewumsebenzi. Kuzwakala kulula, kodwa eziningi ematendeni emakethe is behluleka ukwenza kanjalo, ngisho ke okukhulunywa amanzi ikholomu 5000mm. Siyabonga zasendlini imishini yokuhlola imvula, okuyinto enze kube nokwenzeka ukuba abe ukukhanya imvula ukuba ahlasele kunini, ke usisize ukuthola kungenzeka avuzayo ukuqinisekisa ukuba bakwazi ukukhiqiza ephelele etendeni amanzi.
Indlela yokwenza itende waterproof?
Okokuqala, uma etendeni waterproof akugcini nje ezihlobene ngendaba kodwa cabanga nangezilaleli zincike design futhi bewumsebenzi. Ngaphambi Ubeka oda, uzowathola ukubuza kangcono umphakeli wakho ngakho bese impendulo ecacile.
Okwesibili, ungaba tarp kanye etendeni lakho njengoba isethi ukwenza etendeni lakho amanzi. Sicela ukhumbule ukuba umyalelo kanye etendeni lakho.
Indlela yokubona itende eziningi kanjani umuntu?
Ngakho ukuze ISO5912, zikhona 2 izigaba ematendeni. Isigaba A nge isisindo ingqikithi umuntu hhayi ngaphezulu kuka-2.5kg, Isigaba B ngayinye nge- isisindo ingqikithi umuntu ezingaphezu kuka 2.5kgs ngayinye. Ukuze Isigaba B, umuntu ngamunye kufanele abe endaweni yokulala ezingeqile kwezingama-200 x 60cm. Ukuze Isigaba A, ubude akufanele esingaphansi 195cm, ububanzi kusuka phansi kuya emahlombe akufanele esingaphansi 58cm, ngasekhanda & izinyawo isikhundla akufanele esingaphansi 35cm. Uma kunzima kuwe ukuthi uyikhumbule, nje engqondweni ukuthi umuntu ngamunye kufanele abe endaweni yokulala ezingeqile kwezingama-200 x 60cm.
Indlela ukuchaza itende iyafaneleka?
Okokuqala, kufanele sihambisane nomthetho lapho kuzobe kudayiswa, ezifana umlilo ukumelana at eNyakatho neMelika emakethe.
Okwesibili, uma ukupholisa kwanele. ISO5912 has imfuneko based ngakho. Kodwa etendeni kufanele yakhelwe ngokuvumelana lokushisa emakethe ezahlukene.
Okwesithathu, qiniseka etendeni amanzi ngaphandle ke ukuklama hhayi ukucela amanzi. Yilokho imfuneko eyisisekelo kodwa eziningi ematendeni ahluleke ukufeza ke.
Kona, Uhlaka aqinile nezimo futhi iqine.
Okwesihlanu, ancike injongo ezahlukene, kufanele kube ezahlukene ukwakhiwa design bese ukhetha impahla ezahlukene. Uma uneminye mfuneko, ukhululeke uxhumane nathi.
Ingabe kudingekile ukusebenzisa nendawo yamathe onyawo, indlela yokusebenzisa nendawo yamathe onyawo?
Footprint angabavikela etendeni lakho phansi esuka izinto ezicijile, ezifana itshe lolwandle, esigxotsheni. Akuwona wonke etendeni badinga lokungcolisa.
Lapho ufake lokungcolisa uphansi kwezilenge, qiniseka ungenayo izingxenye zalo kude etendeni lakho, ngoba uma lina, amanzi ungathola ku lokungcolisa futhi ugijime ngaphansi etendeni lakho futhi bathele phansi letende.
Ingabe uyazi ukuthi zingaki uhlobo lokuthunga ezakhiwe ka elele isikhwama? Uyini umehluko?
Yini ukwakhiwa lokuthunga bag yakho ilele? Ingabe kahle zafanelwa inhloso yakho? Ingabe umphakeli wakho ethi kumelwe okuyinto ukwakhiwa isetshenziselwa esikhwameni sakho ingalali futhi isici ukwakhiwa ngamunye? Ngokuvamile, zikhona 2 ezakhiwe ehlukahlukene edayiswa emakethe, H chamber kanye double H ekamelweni.
I-H Chamber kuyinto ukwakhiwa elula futhi ethandwa kakhulu, thunga igobolondo, ukwahlukanisa kanye abami ndawonye ngqo. Lokhu ukwakhiwa ngokuvamile esetshenziselwa ehlobo-entwasahlobo onobuhle
Double H ekamelweni , okuyinto ethandwa kakhulu esetshenziselwa lokushisa ongaphakeme isikhwama ekulaleni. Kukhona 2 izingqimba ehlukile, elingaphandle ungqimba Sew igobolondo & eyodwa ungqimba ukwahlukanisa ndawonye kanye kwangaphakathi ungqimba Sew ulwelwesi kanye ngesinye isendlalelo ukwahlukanisa ndawonye, bese bethunga 2 izingqimba ndawonye. Lokhu H ukwakhiwa double bebengaba ukwahlukanisa okwengeziwe nokusebenza kangcono ukwedlula H ekamelweni uqhubeka ulele isikhwama ukufudumala. Ngemva eziningi ezishisayo ukwahlukanisa uhlolo "dummy ezishisayo", sithola kukhona namanje "Amaphuzu Cold", ngakho sisebenzisa i ngcono double H ukwakhiwa.
Ithuthukisiwe ikamelo eliphindwe kabili le-H, as it’s name shows, it’s improved based on double H chamber. The sewing line on double H for both 2 layers are at same level, thermal will loss through these “cold pints”. In order to solve this problem, we designed this improved double H chamber.
Ingabe isikhwama sakho ingalali waterproof?
Uma umuntu akutshele ukuthi isikhwama sabo ingalali amanzi, kufanele ucabangele uma / yena kule umugqa. Sleeping isikhwama kufanele HHAYI manzi, ke kudingeka ukuba amanzi oxosha futhi esiwuhogelayo. Uma isikhwama ekulaleni amanzi, ke ngeke esiwuhogelayo okukhethekile ezinye eliphezulu kakhulu izinga lendwangu. Umthengi ngeke ujuluke futhi izizwe ingakhululekile.
Sine izikhalazo eziningi izinkinga uziphu ku isikhwama wethu ulele, ingabe kukhona isixazululo?
ukusebenza Uziphu ku elele isikhwama ezihlobene izinga uziphu nesokulala isikhwama design. Sine uziphu ne quality enhle kakhulu kodwa abiza 30-40% of YKK uziphu. Uma umuntu akutshele ukuthi uziphu yabo muhle, sicela musa ukuhlola uziphu uqobo kuphela, uzowathola ukuhlola kangcono uziphu ku elele isikhwama.
It incike ezahlukene ukwakhiwa isikhwama zokulala kanye impahla ezahlukene ezisetshenziselwa. Sicela uzizwe ukhululekile usazise uma ufuna umshini washable isikhwama ekulaleni.
Ingabe epikinikini yakho ingubo kuyinto umshini washable?
Sine umshini washable epikinikini ingubo, kodwa akuzona zonke ingubo epikinikini is mashing washable. Sicela uxhumane nathi ukuze uthole imininingwane.
Indlela ukuqinisekisa izinga umkhiqizo? Yini nesilinganiso ingabe athathwe?
Sinomthetho wokuthi kukhulunywa esiqinile ukuze ihlolwe. Zonke izinto ngeke zihlolwe futhi yonke imikhiqizo siphelile uzobe zihlolwe ngamunye ngamunye ingakafiki imithwalo. Ungakwazi ukwazi uma umphakeli wakho enze ukuhlolwa imikhiqizo yakho ngokuhlola uma kukhona noma iyiphi ucezu okuzenzakalelayo. Akunakwenzeka ukuthi 100% we imikhiqizo yabo ukuhlangabezana ejwayelekile.
Ingabe imikhiqizo yakho chemical mahhala futhi imvelo enobungane?
Iningi imikhiqizo yethu kukhona imvelo ezinobungane. Kodwa njengoba ehlukene emakethe ine ezahlukene mfuneko, sicela uhlole nathi ukuze uthole imininingwane. Ungase futhi usazise target emakethe wakho, khona-ke singahlinzeka imininingwane efanele.
Unganikela intengo aphansi emakethe?
Ngicabanga ukuthi akufanele okukhethayo ezinhle uma gxila intengo kuphela. Thina unganikeza ngentengo ukuhlulwa esekelwe design ezinhle umkhiqizo futhi nice izinga umkhiqizo.
Kuyini ukuze ubukhulu bakho ubuncane?
I ubuncane oda ubuningi zincike izinto ezahlukene nemininingwane mkhiqizo. Ngokuvamile kusukela 500pcs ukuba 2000pcs, ezinye izinto okuningi abanye okuyingcosana. Sicela uxhumane nathi ukuze lento ngamunye ezahlukene.
Yebo, sinobufakazi ithimba eliqinile othuthukayo. Imikhiqizo ayengase enziwe ngokusho isicelo sakho.
Maqondana nezibonelo, phambili isikhathi imayelana ezingu-7. Ukuze nokukhiqizwa kwezinto ngobuningi, phambili isikhathi izinsuku ezingu 45-60 ngemva kokwamukela inkokhelo idiphozi. Isikhathi phambili ngempumelelo uma (1) sesamukele imali yakho, futhi (2) siyamukeleka sakho sokugcina imikhiqizo yakho. Uma zethu izikhathi lead azisebenzi umnqamulajuqu akho, sicela uye phezu nezidingo zakho nge abasebenzi bethu. Kuzo zonke izimo sizozama ukuze ifanelane nezidingo zakho. Ezimweni eziningi esikwazi ukwenza kanjalo.
Kuyini inkokhelo yakho futhi ithuluzi lokukhokha?
elithi Inkokhelo: 30% idiphozi kusengaphambili, 70% esele ngokumelene ikhophi B / L nge izinsuku ezingu-10.
ithuluzi Inkokhelo: TT, L / C, Western union & PayPal.
Izindleko zokuthumela incike indlela oyikhethayo uthole izimpahla. Express esheshayo kodwa futhi indlela esibiza kakhulu. Ngu ulwandle isixazululo esingcono ngoba ivolumu enkulu. Ngezinye izikhathi, ngesitimela. Uqinisile yizimpahla amazinga itholakala kuphela uma sazi imininingwane ivolumu, isisindo futhi umkhumbi indlela. Sicela uxhumane nathi ukuze uthole olunye ulwazi.